အသားအရေ အမျိုးအစား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အသားအရေ အမျိုးအစား
- May Beaute
Posted by May Beaute on Jun 30, 2012 in Health & Fitness, Style & Beauty | 8 comments
Skin Care အသားအေရ
Skincare နဲ့ makeup တွေဝယ်တော့မယ်ဆို ကိုယ့်အသားအရေအမျိုးအစား(skin type) ကဘာအမျိုးအစားလဲ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အသားအရေက ဘယ်အမျိုးအစားထဲပါလဲ သိဖို့ထက် အသားအရေအမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိတယ်၊ ၎င်းတို့ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် တွေကိုအရင် သိဖို့လိုပါတယ်။ ကဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…
ခြောက်သွေ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်ရင်တော့ ဝမ်းသာရတော့မှာပါဘဲ။ အသားအရေက ခြောက်သွေ့နေလို့ ထိန်းသိမ်းရတာ နည်းနည်း သက်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြောက်သွေ့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းမှု မလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားရင် အသားအက်ကွဲမှု၊ ပါရေတွန့်မှု နဲ့ အသားအရေ ပျက်ဆီးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တချို့ကျပြန်တော့ ဒီအသားအရေအမျိုးအစားကို ကြိုက်ပါတယ်။ သူက အမြဲပြောင်ပြောင်လေး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ပြောင်ပြောင်လေး ဖြစ်နေတိုင်းလဲကောင်းတာ မဟုတ်သလို အမြဲဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ချွေးပေါက်လေးတွေက အမြဲပွင့်နေလို့ ပိုးမွှားနဲ့ ဖုန်တွေအလွယ်တကူ ဝင်နိုင်ပီး ဝက်ခြံအလွယ်ထွက်နိုင်လို့ပါ။ ဒါကို sensitive skin လို့ခေါ်ပါတယ်။ မျက်နှာဟာ အမြဲအဆီတွေပြန်ပီး ရွစိရွစိ နဲ့ယားနေတတ်ပီး အမြဲစီးကပ်ကပ်ကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအသားအရေပါဘဲ။ အသားအရေက အမြဲ လင်းနေပီး မျက်နှာကို ကိုင်လိုင်ရင် နူးညံ့မှုကို အလွယ်တကူခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်မှု အနည်းဆုံး အသားအရေအမျိုးအစားပါ။ သုံးနေကျ skincare ကိုဘဲ အထူးတလည်ထိန်းသိမ်းမှု မလုပ်ဘဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအသားအရေကို မိန်းကလေး ၅ယောက်မှာ ၁ယောက်ဘဲပါနိုင်တယ် လို့research တွေကပြောပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ ကံကောင်းပါတယ် normal skin type ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ။ အများကြီး ဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲ ရာသီနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပီး skincare ကိုရွေးလိမ်းသွားရုံပါဘဲ။
About May Beaute
May Beaute has written2post in this Website..
View all posts by May Beaute →
ကျုပ်ကတော့ အမြဲနက်မှောင်ပြီး ပြောင်ချော်ချော် စကင်း ပိုင်ရှင်ပါ
5 Basics Skin Types
However, the health and beauty of your skin later in life largely depends on what you eat and how you take care of yourself. A popular Russian saying states that, after the age of 30,awoman looks the way she deserves …To always look great, the first step is to determine your skin type so that you can match it with the best recommended methods to improve your look and slow the aging process.
Credit to Amanda Brown
အသားမဲ မှ ပတ္တမြားခဲ
အသားအရေနဲ ့ပတ်သက်ပြီး စာချိုးလေး တစ်ခု ကြားကြရတယ်
“ ဖြူ ဘာဖြစ်
ညို ဘာဖြစ် ” ဆိုလားဘဲ
ဦးပေ နော် ဦးပေ ..ဒီလူကြီး .. မသိချင်ယောင်ဆောင်မေးနေတယ် .. :grin:
ကျနော်တို ့ယောကျာ်းလေးတွေ မျက်နှာအဆီပြန်တာကို ဘယ်နည်းနဲ ့ဖြေရှင်း
ကျုပ်ကတော့ skin care မလိမ်းတတ်တဲ့ လူပါ ..
ဒါကြောင့် ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ရှုသွားပါတယ် ..